Izibopho ze-Deep Wave zaseBrazil Izibopho ze-Deep Wave zaseBrazil
I-Brazilian Deep Wave Bundles - I-Soie Virgin Hair Extensions
I-Extensions yaseBrazil yase-Brazilian Deep Wave
yethu I-Brazilian Deep Wave Hair Extensions ziveliso zezinwele ezingenanto eziguguleyo. Intloko yomntu ngamnye isuka kubaxhasi be-1-2 kwaye ithatyathwa ukulungiselela kwayo. Ezi zandiso zeenwele zaseBrazil ziyi-premium ngoko, i-cuticles kunye nezinwele zezinwele zomelele! Izinwele ziya kuhlala malunga ne-2 iminyaka ngokunyamekela.
Ukulondolozwa okuphantsi, i-sheek, kunye nesimo esifanelekileyo, i-Brazilian Deep Wave Hair Extensions zethu zizandiso zentlungu ezithandwa ngabantu. Kulula isitayela, sithatha umbala kakuhle, kwaye sinconywa ngabaphathi beetekethi kubaxhasi abanomdla kakhulu. Iingqungquthela zigalelo kwi-scalp yokuphefumula ngamandla kwaye zihle kakhulu kwiintsuku zasehlobo zaseburhulumenteni.